About Us - Shandong Drick qalabku Co., LTD
Drick qalabku co., Ltd. waxaa majoring ee cilmibaadhista, wax soo saarka iyo adeegyada farsamada ee shaybaarka iyo Warshadaha qalabku imtixaanka.
Waxaan sidoo kale u dhaqmaan sida wakiilka iyo bixiyaan adeeg imtixaanka si wax soo saarka shirkadaha adduunka ka caan ah suuqa Shiinaha. Intaa waxaa dheer, waxaan si firfircoon kor ugu shuqullada sida ganacsiga, taageero farsamo iyo adeeg-iib aheyn ka dib. waxyaabaha lagu codsanaya in beeraha sida papermaking, baakadaha, daabacaadda, caag iyo bacyaal; dharka iyo Warshadaha non-leh tolmo wanaagsan; cuntada, daawada iyo iwm
Drick qalabku Co., Ltd. ayaa helay CMC (China METROLOGY Certification) (No. 01000127), Midowga Yurub shahaado CE, soo dejinta iyo dhoofinta is xuquuqda PRC, iwm Waxa ay siisey alaabtii imtixaan xirfadeed toban kun oo macaamiisha guriga, iyo waxyaabaha ay ayaa loo dhoofiyay North iyo South America, Australia, Midowga Yurub, Bariga Dhexe iyo koonfur bari Asia, iwm
Ka dib markii sameynta, shaqaalaha oo dhan Drick wada midoobaan, shaqo adag iyo sidaas sameeyaan Shirkadda noqday mid gaar ah in ay qaataan farsamo sida ay xidid, lagugu leeyahay khayraadka farsamo ku filan oo tayo sare. Shirkadda leeyahay shaqaalaha of marketing tamarta iyo tayo sare leh iyo shaqaalaha taageero farsamo oo aqoon ku filan oo ah farsamo qalab iyo farsamo codsanayso. Ka sokow, waxaan sidoo kale u hantidaan shaqaalaha adeegga-sale ka dib markii la technology guud iyo waayo-aragnimada badan. waxyaabaha Advanced, farsamo fiican, shaqo adag, adeega diiran, kulligood way wada dhalaan dhaqanka gaarka ah ee Drick maanta.
Drick had iyo jeer ku hayaa talaabo on technology ugu dambeeyay iyo kasbada si ay u siiyaan wax soo saarka ugu horumarsan macaamiishayada. Drick ku nuuxnuuxsaday, tababarka farsamada iyo horumarinta tayada shaqaalaha. Oo sidan waa shirkadda waxay bixisaa adeeg ku dhawaad ​​kaamil ah si ay macaamiisha ku. Faa'iidooyinka dega biloowday on technology, alaabta iyo adeegyada keeni our macaamiisha badan oo faa'iidooyinka marka aad isticmaalayso technology cusub iyo wax soo saarka.